Lufthansa dia nanampy fifandraisana vaovao fito tany Frankfurt sy Munich ho an'ny fahavaratra 2022
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Lufthansa dia nanampy fifandraisana vaovao fito tany Frankfurt sy Munich ho an'ny fahavaratra 2022
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ho fanampin'ny làlana efatra hafa avy any Frankfurt, ny foiben'i Munich dia hampidirina mafy kokoa amin'ny fanolorana fizahan-tany maharitra an'ny Lufthansa Group.
Avy any Munich mankany Punta Cana, Cancún ary Las Vegas mivantana
Toerana efatra fanampiny avy any Frankfurt: Fort Myers, Panama City, Salt Lake City ary Kilimanjaro
Ny toerana rehetra aleha amin'ny fahavaratra 2022 dia azo alefa hatramin'ny 26 Mey
The Vondrona Lufthansa izao dia efa manolotra toerana fialan-tsasatra mahaliana amin'ny zotram-pizahan-tany lavitra ho an'ny fahavaratra 2022. Ho fanampin'ny làlana efatra hafa avy any Frankfurt, ny foiben'i Munich dia hampidirina mafy kokoa amin'ny fanolorana fizahan-tany hataon'ny Vondrona Lufthansa Group.
Manomboka amin'ny volana martsa 2022 dia hiala indray ny sidina avy any Munich mankany amin'ny toerana malaky an'i Punta Cana any amin'ny Repoblika Dominikanina sy Cancún any Mexico. Ny toerana aleha tsirairay dia hatolotra indroa isan-kerinandro. Ankoatr'izay, hisy sidina roa isan-kerinandro avy any an-drenivohitra Bavarian mankany Las Vegas any Etazonia.
Miala any Frankfurt dia afaka manantena tanjona efatra nofinofy ireo mpandeha. Miverina amin'ny fandaharam-potoanan'ny sidina: Manomboka amin'ny volana martsa 2022, ny Lufthansa Group dia hanolotra sidina telo isan-kerinandro mankany Fort Myers any amin'ny faritry ny masoandro mavitrika Florida ary koa mankany Panama City any Amerika Afovoany. Ankoatr'izay, i Salt Lake City any amin'ny faritra andrefan'i Etazonia dia ho eo amin'ny fandaharam-potoanan'ny sidina voalohany manomboka amin'ny May 2022 - miaraka amin'ny sidina telo isan-kerinandro. Ny vondrona Lufthansa koa dia manitatra ny serivisy any Afrika Atsinanana ary hanidina avy eo Frankfurt mankany Kilimanjaro indroa isan-kerinandro amin'ny voalohany hatramin'ny Jona 2022. Amin'ity fahavaratra ity dia efa misy ny fandaharam-potoanan'ny sidina ao Mombasa (Kenya) miaraka amin'ny sidina mankany amin'ny nosy nofinofy Zanzibar (Tanzania).
Ny sidina dia havoaka voalohany miaraka amin'ny laharan'ny sidina Lufthansa amin'ny herinandro ambony (26 Mey). Izy ireo dia hiasa amin'ny alàlan'ny Eurowings Discover amin'ny fahavaratra 2022. Ny kaompaniam-pitaterana vaovao an'ny Lufthansa Group dia natao manokana amin'ny dia fizahan-tany avy any amin'ny foiben-toeran'ny Frankfurt sy Munich.